Fadlan miyaan dili karnaa khuraafaadka foojignaanta? | Martech Zone
Talaado, Agoosto 20, 2019 Talaado, Agoosto 20, 2019 Douglas Karr
Isku day sidii aan kari lahaa meesha ka saar khuraafaadkii yaraaday ee dareenka, Waxay sii waddaa inay xukumaan habka bandhigyo badan oo suuq geyn ah iyo khudbado muhiim ah. Marka, waxaan lashaqeeyay asxaabteyda at Ablog Shineemo in la soo saaro kii ugu horreeyay ee fiidiyowyo taxane ah oo tirtiraya khuraafaadka iyo fikradaha khaldan ee internetka online sidoo kalena u keenaya qaar ka mid ah qoraalladayda dadweynaha.
Ka dhig qoraaladaada blog gaagaaban, ka dhigo fiidiyowyadaada kuwo gaagaaban, ka dhig sawiradaada mid fudud… liiska talooyinka xun ayaa sii soconaya. Iyo quraafaad fiiro gaar ah kuma aysan faafin kaliya kuwa suuqa ka ganacsada, waxaa sidoo kale ku faafay warbaahinta waaweyn ee wararka, oo ay ka mid yihiin Wargeyska waqtiga, ka Telegraph, ka Guardian, USA Maanta, ka New York Times, ka Post National, Harvard Raadiyaha Mareykanka iyo buugga maamulka Falanqeynta. Ugh
Nasiib wanaag, hal warbaahin ayaa shaqadii qabatay waxayna baarteen khuraafaadka taas dareenka dadka ayaa sii yaraanayay... BBC. Qoraa Simon Maybin wuxuu la xiriiray isha macluumaadka ee ku taxan - Xarunta Qaranka ee Macluumaadka Bayoolajiyeed ee Maktabadda Qaranka ee Caafimaadka ee Mareykanka, iyo Wakaaladda Wararka ee Associated Press - midkoodna ma awoodi karo raadso wax diiwaan ah cilmi baaris lagu taageerayo stats.
In, weli, mid kale oo la yaab leh… Simon ayaa helay taas kalluun dahab ah dhab ahaantii ma laha dherer gaaban, sidoo kale!
Waxay Ku Saabsan Tahay Xulasho!
Waxaan hadda ku noolnahay adduun ay wax walba yihiin dalab iyo macno ahaan fartayada. Waa kuwan tusaalooyin:
SEO - Waxaan saaka ka raadsaday xoogaa gargaar koodh ah oo aan qoraayay. Waxaan dhagsiiyey natiijooyinka uguhoreeya bogga natiijooyinka mashiinka raadinta mana helin wixii aan raadinayey. Kadib dib ayaan dib ugu qoro raadinta dhawr dariiqo oo ugu dambayntii waxaan helay macluumaad sax ah oo aan ubaahanahay. Taasi ma waxay ka dhigan tahay in dhererkaygu gaaban yahay maxaa yeelay waqti yar ayaan ku qaatay natiijada raadinta kasta? Maya, waxay ka dhigan tahay inaysan quseyn oo waxaan sii waday raadinta macluumaadka aan u baahanahay ilaa aan ka helo. Dareenkeygu marna ma uusan sii dheeraan, qof walbana wuu ka leexanayaa howsha gacanta ku haysa the laakiin xulashooyinka ayaa sameeyay.
Cod iyo Muuqaal - Waxaan jecelahay dhageysiga boodhadhka iyo daawashada cajaladaha fiidyowga, laakiin dulqaad uma lihi xinjirowga ama hadalka is dhiirrigelinta. Waan ka boodi doonaa dhagaysiga ama daawashada fiidiyowyada si isdaba joog ah… ilaa aan ka gaadho natiijo meesha tayada iyo wax soo saarku ay igu siinayaan waxa aan doonayo. Ka dibna waan dhageysan karaa saacado haddii mawduuca uu yahay mid macluumaad iyo madadaalo leh. Waxaan ku noolnahay adduun ka mid ah daawashada fara-ku-tiriska ah ee fiidiyowga loo baahan yahay… dadweynow, ma jiraan arrimo fiiro gaar ah u leh dhammaadka usbuuca Ciyaaraha Carshiga!
AJ waxay qabataa shaqo weyn oo xitaa wadaagista fiidiyowyada halka kuwa bartilmaameedsanaya ay udhaxeeyaan sagaal sano ilaa shan iyo toban sano! Taariikhda oo dhan, curmudgeons-kii hore waxay kula dagaallameen dhallinta inay fiiro gaar ah u yeeshaan… kuwaan Youtubers-ka ahna waxay awoodaan inay helaan balaayiin aragtiyo ah oo fiidiyowyo ah oo mararka qaarkood soconaya wax ka badan saacad.
Dhallinyaradeenu waxa ay haystaan ​​oo aynaan haysan waa xulasho iyo habboonaan.
Marka Maxay taasi uga dhigan tahay Suuqleyda?
Waxaan kula tartami lahaa dadka suuqleyda ah inay u dhaqaaqaan dhanka ka soo horjeedka. Bixi maqaallo qoto dheer, tan tirakoobyo ah, talooyin wax ku ool ah, sawirro muuqaal ah, fiidiyowyo, iyo boodhadhyo si qoto dheer ugu dhex daadanaya mowduucyada xiisaha u leh dhagaystayaasha aad bartilmaameedsanayaan. Waan sii wadaynaa
Macaamiil kasta oo aan horumarinno a maktabadda waayo quusitaanadan qotada dheer waxay u soo saaraan natiijooyin la yaab leh iyaga. Hubaal visitors qaar martida ah oo aan khusayn ayaa iskaan sameeya oo ka tagaya… laakiin rajada raadineysa macluumaadka way sii joogi doontaa, liqi doontaa, la wadaagi doontaa, kuna lug yeelan kartaa macluumaadka la bixiyey. Haddii aad rabto inaad ku guuleysato nuxurka, jooji soo saarista durdurrada aan dhammaadka lahayn ee waxyaabaha qashinka ah oo bixi tayo sare, macluumaad macluumaad ah oo bartilmaameedkaaga ay raadinayaan!
Tags: quraafaad fiiro gaar ahFiidiyowyada Suuqgeyntakhaldan la'aanta
10 Dariiqo oo la Hubiyo oo Loogu Kaxeeyo Gaadiidka Websaydhkaaga Ecommerce